အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း
28 Responses to “စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း”
ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို လာရောက်ရှာဖွေသွားပါတယ်.. ဟုတ်ပါတယ်.. လူတွေဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ သောကတွေကျရောက်တဲ့အခါ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ နေနိုင်ဖို့ သိပ်ခက်ပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်း ဘာသာပြန်လေးတွေများတယ်နော်... ဖတ်လို့ကောင်းတယ်...
ဧချမ်းငြိမ်သက်ပြီး ခပ်မှန်မှန် ဆက်လက် လျှောက် လှမ်း နိုင် ပါ စေ။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုယ့်မှာ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိဖို့ဆိုတာအရမ်းလိုအပ်ပါတယ်... ကြိုးစားရအုန်းမယ်...ဘာသာပြန်လေးတွေ များများတင်တဲ့ မချော ကို ကျေးဇူး။
ကျွန်တော်တို့ အထင်တော့ ပထမ ပန်းချီကားကိုပဲ ရွေးချယ်မိမှန် အမှန်ပဲဗျ.. တကယ်တန်း စဉ်းစား၊ နှလုံးသွင်း လိုက်တော့... ဒုတိယ ပန်းချီကားဟာ.. တကယ့် ပကတိ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းခြင်း ဆိုတာကိုသွားတွေ့ပြီးတော့.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို.. နှလုံးသွင်း ဆင်ချင်မိစေပါတယ်ဗျာ....
အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ ဆိုတာမျိုးလိုပေါ့နော် အစ်မချော။ ငြိမ်းချမ်းမှု မရှိပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်တာ ပိုပြီးအနှစ်သာရရှိတာပေါ့နော် ။ ဟီး ပြောကြည့်တာ ဟုတ်လားတော့သိဘူးရယ် သားကငယ်သေးတာကိုးလို့ :)
အဟွတ်ဟွတ် တုတ်ကွေးတော့ သတိထားဗျား)
အင်း... ရွေးရတော့ ခပ်ခက်ခက်ဘဲ အမရ။ ဘုရင်ကြီးက သူ့စိတ်နှင့်ကိုက်ညီလို့ ရွေးချင်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ခိုင်းပြန်ရင် နောက်တစ်ခုကို မရွေးချယ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရပြန်ဘူး။
ငှက်အသိုက်ပြုလုပ်တာဟာ လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင် မိသားစုအတွက် ဧရာမအိမ်ကြီးတစ်အိမ်ဆောက်နေရသလိုမျိုးပေါ့။ သူ့အထွာနဲ့သူပေါ့ အမ။ အဆောက်အဦဆောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီအဆောက်အဦအတွက် ပြီးမှပြီးပါ့မလားဆိုပြီး စိတ်ပူနေရလို့ စစ်မှန်သော.. ငြိမ်းချင်းခြင်းမျိ
စိတ်ပူနေရလို့ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုး ရနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ခေါင်းစဉ်လေးက စစ်မှန်သော မိဘမေတ္တာ သို့မဟုတ် စွန့်လွတ်စွန့်စားခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ ငှက်သိုက်ကလေးကို ပထမပေးသင့်ပါတယ်။
အမရေ... ထပ်ပွါးကြည့်တာနော်။ ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး။ ဖွသွားတာ။ အမစာရေးတာလေးတွေ မလွတ်တမ်းဖတ်နေပါတယ်။ ပညာရလို့။
သေချာဖတ်သွားပါတယ် စဉ်းစားစရာတွေ ပါတယ် ဘုရင်ကြီးပြောတာလည်း သဘောပေါက်တယ် ကိုကိုမောင် ပြောတာလည်း စဉ်းစားစရာဘဲ
အင်း ဖတ်ရတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်..ပြီးတော့ တစ်ကယ့်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလဲ သဘောပေါက်သွားပါတယ်
That's the thought provoking...
ဒီပန်းချီကားလိုပဲ ... လူနေမှုဘဝမှာ လှုပ်ခတ်ပြီး ရှုပ် နေနိင်ပေမယ့်
စာရေးတဲ့နေရာမှာ မထိခိုက်ဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် လေးနက်စွာ
ရင်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး တရား နာကြားခွင့်ရလိုက်သလိုပါပဲ....
လူသားအားလုံးအတွက် တကယ့်ကို လိုအပ်လှပါတယ်..။
စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဘယ်သူတွေ ရှာဖွေရနေကြပြီလဲ...?
စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဘယ်သူတွေ ရရှိနေကြပြီလဲ...?
ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်ဖက်စွာ စိတ်ထဲအေးချမ်းသွားတယ်..။ ခေါင်းစဉ်ပါ အကြောင်းအရာကြောင့်တင် မဟုတ်ပါဘူး..။ ဒီစာကိုရေးဖွဲ့နေချိန် ရှိနေမယ့် ချောရဲ့ ငြိမ်းအေးတဲ့စိတ်ထားကိုပါ စာသားတွေကနေတဆင့် ရရှိလိုက်လို့ပါ..။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိတယ်..
ဘုရင်ကြီးရွေးတဲ့ ပန်ချီကားထဲက ငှက်ကလေးလို ပတ်ဝန်းကျင် ရှုပ်ရှုပ် ရှင်းရှင်း စစ်မှန်တဲ့ 
ြှုငိမ်းချမ်းခြင်း ရအောင်ကြိုးစားပါမယ် ....
တန်ဖိုးရှိတဲ့စာစုအတွက် ကျေးဇူးပါမမချော...
မမချောတစ်ယောက် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေ ရရှိပါစေ...
မွန်လည်း ဘုရင်ကြီး ရွေးတာ ရွေးမိမှာပါပဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိသားစုအရေး အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အဆင်ပြေနေမှ
ကိုယ့်အတွက်ကို စဉ်စားချင်တယ်..ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ဖြစ်မိလို့ပါ ။
ပိုစ့်ကောင်းလေးတွေ ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။
မမရေ....အဲဒီလိုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းမျိုးနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အနည်းငယ်တော့ခက်မယ်ထင်တယ်နော်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာမျိုးက ကိုယ့်အပေါ်မှာအနည်းနဲ့အများတော့ ရိုက်ခတ်တတ်တာမျိုးပဲလေ....။ ဒါပေမယ့် နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေ့ါနော....။း)
စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့လား။ ရရှိအောင်တော့ ကြိုးစားကြရမှာပေါ့လေ...
အခုသဘာဝလောကကြီးတည်နေတာ လူတွေ ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေ ၊ သက်ရှိသက်မဲ့ ၊ ဒြပ်ရှိဒြပ်မဲ့တွေ
ရောပွမ်းတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာ မေ့ထားလို့မရပါဘူး ။ အဲဒီ့တော့ကိုယ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ သဘာဝလောက
ကြီးနဲ့အလိုက်အထိုက် နေနိင်ပြီး အပြစ်ကင်းတဲ့နေထိုင်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်မှ တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်
နိုင်မယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဆိုရင် ဒုတိယပန်းချီကားကိုပဲ ရွှေးချယ်မိမှာပါ..။
လူသားအားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ အရာပေါ့ ချောရယ် ... ပန်ချီးကားကိုလဲ စိတ်ဝင်စားသလို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကိုလဲ စိတ်ဝင်စားတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးရွေးသလို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ကိုပဲ ရွေးတာထက် အများနဲ့ အံဝင်တာကိုရွေးမှ ငြိမ်းချမ်းရေး က ပိုစစ်မှန်ပြီး တည်မြဲမယ်လို့လဲ ခံစားမိသေးတယ် ။။ ချောရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ကိုယ်တွေးချင်ရာ တွေးမိတာကိုရေးမိတဲ့အတွက် ခွင့်လွတ်နော်
ပန်ချီကားဆိုတာ လောကသဘာဝအရ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့အရာမို့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် နှစ်သက်စရာအရာ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မှာ တစ်ကယ်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာသာလျှင် ကျနော်တို့မျှော်လင့်စောင့်စာနေတဲ့အရာမို့ကျနော်ကတော့ .....